Honeymoon tsara indrindra sy fialan-tsasatra ara-panahy
Fialan-tsasatra ho an'ny mpivady
Tora-pidinina izay mamono ny saina, vatana ary fanahy
Raha misy tabataba be loatra sy adin-tsaina eo amin'ny fiainanao, ny zavatra farany izay ilainao roa dia amin'ny iray hafa amin'ny vakansy.
Raha tokony hiverina avy eny an-tranokala tapaka sy jiro ianao, dia afaka miverina salama kokoa sy bebe kokoa amin'ny fiadanana miaraka aminao sy ny namanao. Ahoana? Mba hikolokolo saina sy vatana ary fanahy dia mandany ny vakansinao manaraka any amin'ny tendrombohitra iray mirehitra, ala honko na ny nosy.
Inona no hitranga amin'ny fialantsasatra amin'ny fialan-tsasatra?
Ny fialan-tsasatra fialan-tsasatra tsara indrindra dia hanolotra seho an-tsarimihetsika izay azonao atao.
Ny mpivady sasany dia mandao ny yoga ary misaintsaina ao anatin'ny tontolo feno filaminana. Ny hafa dia mahita fitsangatsanganana eo amin'ny natiora ary ny fitsaboana amin'ny spa manaraka. Ny hafa dia mandray anjara mavitrika amin'ny atrikasa mba hanatsarana ny fifandraisana.
Mba hanampiana anao amin'ny dianao dia diniho ireto toeram-pialan-tsasatra sy loharanom-pialam-boly manaraka ireto:
Omega Institute for Studies Holistic - hita ao amin'ny Valley Hudson any New York. Amin'ny fahavaratra, ny fialantsasatra amin'ny fialantsasatra ao amin'ny Omega Institute (ny fijanonana farany ambany dia roa alina) dia mety hahitana ny filomanosana, ny lakana, ary ny fanaovana kayak amin'ny farihy; mandeha amin'ny labyrinth; fanorana; fianarana isan'andro ao yoga, meditation, tai chi, ary hetsika; misaintsaina ao amin'ny fitoerana masina; Lalan'ny bisikileta; Na dia mipetra-potsiny ao amin'ny tranokalan'ny Ram Dass 7,000 aza ary miasa amin'ny tetikasa famoronana.
Ny Omega Institute ihany koa dia manomana seminera sy fahatsaram-panahy isan-kerinandro sy atrikasa izay natokana ho an'ny fahasalamana, hevitra vaovao, fanavaozana ny tena, ary lohahevitra ara-panahy.
Ny Famerenan-keloka manokana ataon'ny Personal dia ahafahan'ny mpitsidika mamolavola programa fialantsasatra mifanaraka amin'ny tombontsoany manokana. Fiverenam-bidy ny trano: Misy kabine mitafo avo roa heny sy fitoeran-drivotra manokana no ambony indrindra amin'ny toerana ao New York. Ny Omega Institute ihany koa dia mitantana atrikasa, fitsangantsanganana fialana aina, ary fitsidiam-pitokanana any Karaiba.
Miraval - any atsimon'i Arizona, Miraval dia tohanana hatrany ho toy ny iray amin'ireo toeram-pisakafoanana lehibe any Amerika. Saingy mihoatra noho izany.
Amin'ny fifantohana amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy dia tsy ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena fotsiny ihany no alehan'i Miraval - Miraval dia manolotra safidy maro mifandraika amin'ny fomba fandehanana fotoana eto ary hahatanteraka ny iraka ataon'izy ireo amin'ny "fifandimbiasam-piainana." Na dia misy fikarakarana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana ara-potoana aza dia tsy mitovy ny fijanonan'ny tsirairay, ary tsy misy fandaharam-potoana voatokana. Ny trano dia misy casitas misy patio manokana misy tanàna dimy. Misy efitra fisakafoanana misy kamiao.
Ny zava-mahatalanjona Equine Miraval dia natao hanampiana ny olona handresy ny tahotra sy ny ahiahy amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny soavaly mora, raha ny fandaharam-pianarana Sex and Vitality ataon'ny Drs. Lana Holstein sy David Taylor, mpanoratra ny Weekend Erotic Erotic Age, dia manosika fientanam-po indray amin'ny fialantsasatry ny fialan-tsasatra.
Canyon Ranch - mifantoka amin'ny fahasalamana sy ny mahasalama, ny Canyon Ranch dia mitazona ny toerana ao Lenox, Massachusetts sy Tucson, Arizona. Ny mpikarakara Mel Zuckerman dia manazava ny iraka nataon'ny Canyon Ranch:
Misy sakafo telo gourmet iray isan'andro, fitsaboana amin'ny sakafo sy atrikasa, kilasy fianarana maimaim-poana, fitsangantsanganana an-tendrombohitra, fitsaboana spaomiera roa, ary fandaharam-pitsaboana marobe sy fandaharana maro isan-karazany dia mety ho anisan'ny vakansy amin'ny fisotroan-drivotra.
Fialofana avy amin'ny efitrano tsara tarehy sy tsara tarehy ho an'ny trano fonenana. Misy sazy henjana ho an'ny fifohana sigara ao an-trano, ary ny vahiny dia mila maka fitsapana ara-pitsaboana eo an-toerana raha te handray anjara amin'ny hetsika fanatanjahan-tena.
Ny Institut Esalen - hita any Big Sur, Kalifornia, any amin'ny Oseana Pasifika. Launchpad ho an'ny hetsi-panoheran'olombelona, ​​nanosika olona maherin'ny 300.000 i Esalen nandritra ny tantara naharitra 40 taona ho toy ny atrikasa sy toeram-ponenana fitsangatsanganana vakansy. Ny fandraisana anjara amin'ny "Olaimpika ny vatana, saina, ary fanahy", dia milaza ny tenany fa "tsy dia betsaka loatra" ho mahery vaika, haingana kokoa, avo kokoa "toy ny lalindalina kokoa, matanjaka ary maharitra."
Avy ao amin'ny Big Yurt mankany amin'ny trano fialan-tsasatra kely ao amin'ny lavaka mafana izay novolena tamin'ny fanasitranana ny loharano voajanahary (azo atao amin'ny akanjo-raha ilaina fandroana iombonana), i Esalen dia manome ny fanamafisana ny olona hikolokolo sy hanova ny tenany amin'ny fialantsasatra fialantsasatra.
Ny fandaharam-pampianarana hafa sy ny fandrosoana ataon'ny tena manokana dia mifantoka amin'ny fanasitranana, yoga, psikology, ekolojia, ara-panahy, zavakanto, mozika ary lohahevitra vaovao. Ny trano dia maotina ary any amin'ny trano sasany dia zaraina.
Naked ny Ampakarina
Boky Top ho an'ny mpankafy
Sary androany Valentines
4 jolay 2018
April Ideas Anniversary
Honeymoons faharoa ho an'ireo mpivady be fitiavana
Inona no fantatrao momba an'i Richmond Virginia?
Cairns vs The Coast Gold: Inona no tsara indrindra?
Parks sy Fialam-boly any Missouri
Navy Memorial ary Ivontoeram-pambolena an-dranomasina ao Washington, DC
Thalys Trains: Fahitana ny tamba-jotra High Speed ​​Rail
Fetiben'ny Mozea Smithsonian any Phoenix
Big Surf Water Park ao Tempe AZ
Senior Citizens any Arizona
Toeram-pivarotana lehibe 6 any Toronto
Bizarre & Fihetsiketsehana hafahafa any Espana
Mianara rehefa be atao ny Disney World
Veronica Mars mpilalao sarimihetsika any San Diego
Manome lisansy mariazy any Houston